Izijeziso Zobudlova Basekhaya Nokuhlukumeza Ngokocansi | Abameli UAE
Izijeziso Zodlame Lwasekhaya Nokuhlukunyezwa Ngokocansi e-UAE
Udlame Lwasekhaya Nokuhlukunyezwa Ngokocansi e-UAE
Kuze kube muva nje, lapho i-United Arab Emirate (UAE) yenza uchungechunge lwezinguquko ezingokomthetho, owesilisa 'ingayala' umkakhe nezingane ngaphandle kwemiphumela yezomthetho, inqobo nje uma bengekho amamaki angokomzimba. Naphezu kokugxekwa yizinhlangano zamazwe ngamazwe nezendawo zamalungelo abantu, i-UAE yenze izinyathelo eziqhubekayo endleleni yayo yodlame lwasekhaya, ikakhulukazi ngokudlula kombuso. Inqubomgomo Yokuvikela Umndeni ka-2019.
Inqubomgomo inweba incazelo yodlame lwasekhaya ukuze ihlanganise noma yikuphi ukuhlukumeza, ulaka, noma izinsongo zelungu lomndeni eziqondiswe kwelinye ilungu lomndeni ezibangela ukulimala ngokomzimba noma kwengqondo. Empeleni, Inqubomgomo ihlukanisa udlame lwasekhaya lube amafomu ayisithupha, okuhlanganisa:
Ukuhlukunyezwa ngokomzimba - ukubangela noma yikuphi ukulimala komzimba noma ukuhlukumezeka ngisho noma kungekho zimpawu ezisele
Ukuhlukumeza ngokwengqondo/ngokomzwelo - noma isiphi isenzo esidala ubuhlungu bomzwelo kumuntu ohlukunyeziwe
Ukuhlukunyezwa ngamazwi - Ukusho into embi noma elimazayo komunye umuntu
Ukuhlukumeza ngokocansi - noma yisiphi isenzo esihlanganisa ukuhlukumeza ngokocansi noma ukuhlukumeza isisulu
Ukunganaki - Ummangalelwa wephule lowo mthetho ngokwenza noma ngokwehluleka ukwenza ngendlela ethile.
Ukuhlukunyezwa kwezomnotho noma kwezezimali - noma yisiphi isenzo esihloselwe ukulimaza ohlukunyeziwe ngokumphuca ilungelo noma inkululeko yokukhipha impahla yakhe.
Yize imithetho emisha ingazange igwenywe ukugxekwa, ikakhulukazi njengoba iboleka kakhulu kuMthetho we-Islamic Sharia, iyisinyathelo esibheke endleleni efanele. Isibonelo, esimweni sodlame lwasekhaya, manje sekungenzeka ukuthi kutholwe incwadi yesivimbelo kumlingani womshado noma isihlobo esihlukumezayo. Ngaphambilini, izephula-mthetho zodlame lwasekhaya zazikwazi ukuthola izisulu zazo futhi, ezimweni eziningi, zazibesabisa futhi zibasabise ngisho nangemva kokugwetshwa.
Isijeziso Nesijeziso Sodlame Lwasekhaya e-UAE
Ngaphezu kwezijeziso ezikhona, imithetho emisha ifake izijeziso eziqondile zodlame lwasekhaya kanye nabenzi bokuhlukumeza ngokocansi. Ngokuvumelana ne-Athikili 9 (1) ye-UAE's Federal Law No.10 of 2019 (Protection from Domestic Violence), umenzi wodlame lwasekhaya uzokhonjelwa;
isigwebo sasejele esingafika ezinyangeni eziyisithupha, kanye/noma
inhlawulo efika ku-Dh5,000
Noma ubani otholakala enecala lesibili uzobhekana nesijeziso esiphindwe kabili. Ukwengeza, noma ngubani owephula noma owephula umyalelo wokuvinjelwa uzobhekana;
ukuboshwa izinyanga ezintathu, kanye/noma
inhlawulo ephakathi kuka-Dh1000 no-Dh10,000
Lapho ukwephulwa kwemithetho kuhilela udlame, inkantolo ikhululekile ukuba iphindisele isigwebo. Umthetho uvumela umshushisi, ngokuthanda kwakhe noma ngokucelwa yisisulu, ukuthi akhiphe incwadi yesivimbelo sezinsuku ezingama-30. Umyalo unganwetshwa kabili, emva kwalokho ohlukunyeziwe kufanele afake isicelo enkantolo ukuthi yengezwe isikhathi. Isandiso sesithathu singahlala kufika ezinyangeni eziyisithupha. Umthetho uvumela izinsuku ezingafika kweziyisikhombisa kulowo ohlukunyeziwe noma owonile ukuba afake isicelo sokuphikisana nencwadi yesivimbelo ngemva kokukhishwa kwayo.
Izinselele Zokubika Ukuhlukumeza Ngokocansi e-UAE
Naphezu kokuthatha izinyathelo ezibalulekile zokusiza noma ukulwa nodlame lwasekhaya kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi, okuhlanganisa nokuba osayinile I-United Nations Convention on the Elimination of any form of Discrimination against Women (CEDAW), UAE namanje ayinayo imithethonqubo ecacile yokubika udlame lwasekhaya, ikakhulukazi izehlakalo zokuhlukunyezwa ngokocansi.
Noma imithetho yenhlangano ye-UAE ijezisa kanzima izephulamthetho zokudlwengula nezocansi, kunegebe lokubika nophenyo lapho umthetho obeka umthwalo osindayo wobufakazi kusisulu. Ukwengeza, igebe lokubika nophenyo libeka abesifazane engcupheni yokuthweswa icala locansi olungemthetho uma bedlwenguliwe noma behlukunyezwa ngokocansi.
I-UAE Iqinisekisa Ukuphepha Kwabesifazane
Amaqembu amalungelo abantu asola imibandela ethile ku-Sharia Law 'ngokubandlulula' abesifazane, uma kubhekwa imithetho ye-UAE yodlame lwasekhaya izisekelo zayo ku-Sharia. Naphezu kobunzima nezingxabano ezizungeze imithetho yayo, i-UAE ithathe izinyathelo ezincomekayo zokunciphisa udlame lwasekhaya kanye namacala okunukubezwa ngokocansi. Kodwa-ke, uhulumeni we-UAE usenokuningi okufanele akwenze ukuqinisekisa ukuphepha kwabesifazane namanye amaqembu asengozini, okuhlanganisa nezingane, mayelana nodlame lwasekhaya nokuhlukunyezwa ngokocansi.
Qasha ummeli wase-Emirati e-UAE (Dubai nase-Abu Dhabi)
Siphatha zonke izidingo zakho ezingokomthetho mayelana nodlame lwasekhaya e-UAE. Sinethimba labaxhumanisi bezomthetho le abameli bobugebengu abahamba phambili eDubai ukukusiza ngezindaba zakho zomthetho ezihlanganisa udlame lwasekhaya nokuhlukunyezwa ngokocansi e-UAE.
Ufuna ukuqasha ummeli, kungakhathaliseki ukuthi isimo sinjani. Ngisho noma uzikholelwa ukuthi umsulwa, ukuqasha ummeli oqeqeshiwe e-UAE kuzoqinisekisa umphumela omuhle kakhulu. Eqinisweni, ezimweni eziningi, ukuqasha ummeli osebenza ngodlame lwasekhaya kanye namacala okunukubezwa ngokocansi kuyiyona ndlela engcono kakhulu. Thola umuntu ochwepheshe bezindleko ezifanayo futhi umvumele ukuthi aphakamise izinto ezisindayo.
Sinolwazi olubanzi lwenqubomgomo yokuvikela umndeni ye-UAE, umthetho we-UAE ngodlame lwasekhaya, namalungelo abesifazane nezingane. Xhumana nathi namuhla ukuze uthole iseluleko sezomthetho kanye nokubonisana ngobugebengu bodlame lwasekhaya ngaphambi kokuba kuphuze kakhulu. Sishayele manje ukuze uthole isikhathi sokuqokwa nokubonisana nabameli bethu abakhethekile boMthetho Womndeni kanye Nabameli Bobugebengu ku- +971506531334 +971558018669